४५औं अमेरिकाका राष्ट्रपति
जनवरी २०, २०१७
डोनाल्ड जोन ट्रम्प
(१९४६-०६-१४) जुन १४, १९४६ (उमेर ७५)
न्यु योर्क संयुक्त राज्य अमेरिका
रिपब्लिकन पार्टी (१९८७–१९९९, २००९–२०११, २०१२–हाल)
वि १९७७; सवि १९९१)
वि १९९३; सवि १९९९)
डोनाल्ड ट्रम्प (जन्म: सन् १९४६ जुन १४) ४५औं अमेरिकी राष्ट्रपति हुन्। यिनी बाराक ओबामा पछिका अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् । 
५.३ दिवालियाअन्य उद्यम
५.४ आय र कर
५.५ नेट मूल्य
११ कानुनी विषयमा
एक किशोरावस्थाको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पको कालो-र-सेतो फोटो, विभिन्न बैज र हल्का रंगले पट्टीको साथमा अँध्यारो र कालो पोजो-सैन्य वर्दीमा मुस्कुराउँदै र लुगा लगाइदिन्छ । सन् १९६४ मा ट्राम्पको वरिष्ठ वर्ष पुस्तक फोटो उनको निजी बोर्डिङ स्कूलको युनिटीमा न्यु योर्क सैन्य अकादमी पहिरिएका थिए । डोनाल्ड जॉन टम्पम १४ जून, १९४६ मा न्यु योर्क सहर को क्वीन्स भोजनालयमा जमैका अस्पतालमा जन्मिएका थिए । उनका आमाबाबु फ्रेडरिक क्रिस्ट ट्रम्प, एक रियल एस्टेट डेवलपर्स र मरियम ऐ म्याकलोड हुन। ट्रम्पले जमैका एस्टेट्सको क्वीन्सको क्वीन्समा फैल्यो र सातौँ कक्षाको माध्यमबाट किव-वन स्कूलमा बालवालिकाबाट भाग लिइन्।   13 वर्ष को उमेर मा, उनको न्यूयर्क सैन्य अकादमी,   एक निजी बोर्डिंग स्कूलमा दाखिला भएको थियो, उनको आमाबाबुको खोज गरे पछि उनले मैनहट्टन मा उनको अनुमति को बिना लगातार यात्रा गरे।   १९६४ मा, ट्रम्प को फोर्डम विश्वविद्यालय मा दाखिला लिया।   दुई वर्ष पछि, उनले व्हार्टन स्कूल को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय को स्थानांतरित गर्यो।   व्हार्टन मा, उनले पारिवारिक व्यवसाय, एलिजाबेथ ट्रम्प र बेटा मा काम गरे।  उनले मे १९६८ मा अर्थशास्त्र मा बीएससीसँग स्नातक गरे।   
सन् १९६४ देखि सन् १९६८ सम्मको कलेजमा हुँदा ट्रम्पले चार विद्यार्थीलाई सैन्यमा सेवा गर्ने स्थगित गरे।   सन् १९६६ मा उनले सेवाको लागि मेडिकल परीक्षाको आधारमा फिट रहेको थियो र जुलाई १९६८ मा कलेजबाट स्नातक गरे पछि, स्थानीय मस्यौदा बोर्ड द्वारा सेवा गर्न योग्यको रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो। अक्टोबर १९६८ मा, उनलाई एक मेडिकल डिफर्मेशन दिइएको थियो जसको पछि उनीहरूले एल्ल्समा प्रायः उत्प्रेरित गरेका थिए र 1-वाई को वर्गीकृत गरे: "राष्ट्रिय आपातकालीन स्थितिमा बाहेकका लागि अयोग्य"।  डिसेम्बर १९४९ मा ड्राफ्ट लटरी , ट्रम्पको जन्मदिन, जुन १४ जून ले एक उच्च संख्या पाएको छ जसले उनलाई 1-वाई बिना सैन्य सेवामा बोलाइएको कम सम्भावना दिई।   [1 9] 1972 मा, उनलाई 4-एफ को रूप मा पुनर्विक्रय गरिएको थियो, उनको सेवा देखि अयोग्य।  
ट्रम्पको जन्म १४ जून, १९४६ मा क्वींस, न्यूयार्क सिटी मा भएको थियो। उनको माता-पिता को नाम मरियम ऐनी और फ्रेड ट्रम्‍प हो । प्रेस्बिटेरियन ईसाई धर्मलाई मान्दछन् । उनी अर्थशास्त्र मा डिग्रीधारी छन्।फोडर्म विश्वविद्यालय र पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय को वार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्सबाट उनले पढाई गरेका हुन।
ट्रम्पले हाल सम्म तीनवटा बिहे गरिसकेका छन्। उनको पहिलो बिहे इवाना (पूर्व ओलम्पिक खेलाडी) सँग सन् १९७७ मा भएको भएको थियो र सन् १९९२ सम्म मात्र टिक्न सकेको थियो । त्यसपछि सन् १९९३ मा मार्ला (अभिनेत्री) लाई जीवनसाथी बनाएका ट्रम्पले सन् १९९९ मा उनीसंग सम्बन्ध बिच्छेद गरे पश्‍चात सन् २००५ मा मेलानिया(मोडल)सँग बिहे गरेका हुन्।  पहिलो पत्नीबाट डोनाल्ड ट्रम्‍प जूनियर, इवांका ट्रम्प र एरिक ट्रम्‍प, दोस्रो पत्‍नी मार्लाबाट टिफ़नी ट्रम्‍प र तेस्रो पत्‍नी मेलानियाबाट विलियम ट्रम्‍प नाम गरेको बच्चाहरु छन्। ट्रम्पका तीन विवाहबाट पाँच सन्तान र आठ नातिहरू रहेका छन् ।
उनले व्हार्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी अफ पेनसिलभेनियाबाट शिक्षा प्राप्त गरेका हुन ।
2015 फेब्रुअरीमा, फोर्ब्स पत्रिकाले ट्रम्पको भाग्य4अर्ब सम्म हुने अनुमान गरेको छ। यो ट्रम्पको एक प्रसिद्ध गुण हो। जे होस्, यो 2017 को मेमा घट्यो।
दिवालियाअन्य उद्यम[सम्पादन गर्ने]
ट्रम्पले आफूले आफूलाई राष्ट्रवादीको रुपमा र उनको विदेश नीतिलाइ "अमेरिका पहिलो" को रुपमा व्याख्या गर्थे।
ट्रम्पले कयौं समारोहमा नेटोको आवश्यकता माथी प्रश्न उठाए, अमेरिकाको नेटो सहकर्मीको आलोचना गरे व्यक्तिगत रुपमा अमेरिका यस्ता गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्नेमा विचार राखे।
डोनाल्ड ट्रम्पले लगातार ईरान परमाणु सम्झौताको विरोध गरे र अमेरिका त्यस सम्झौताबाट बाहिरियो।
२ जनवरी २०२० मा उनले ईस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कर्प्स कुद्स फोर्सका मेजर जनरल कासिम सुलेमानी सहित ८ अन्यको हत्याको लागि आदेश दिए। ट्रम्पले इरानले हमला गरेमा इरानको ५२ साँस्कृतिक सम्पदाहरू आफ्नो निशानामा रहेको सार्वजनिक धम्की समेत दिए। ८ जनवरी २०२० मा इरानले इराकमा रहेको दुई अमेरिकी सैन्य शिविरमा क्षेप्यास्त्र हमला गर्यो।
आफ्नो राष्ट्रपतिय अभियानको क्रममा ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको आप्रवासन नीति तिक्ततापूर्ण र विवादास्पद थियो। उनले अवैध अप्रवासन तथा आउजाउ रोक्न मेक्सिको-अमेरिका सिमामा पर्खाल बनाउने बाचा गरे र त्यो पर्खालको खर्च मेक्सिकोलाई तिराउने बताए। उनले अमेरिकामा रहेका लाखौं अवैध आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने बताए र अमेरिकामा जन्मने शिशुको जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकारको आलोचना गरे।
ट्रम्प्ले व्हार्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ़ पेनसिलवेनियाबाट शिक्षा प्राप्त गरेक हुन्। सुरुवाती १९६४ आगस्त मा ट्रम्प दुई वर्ष का लागि ब्रोंक्स मा फ़ोरुन्होंने धम विश्वविद्यालय मा भाग लिए । उनले मई १९६८ में पेनबाट स्नातक को उपाधि का साथ अर्थशास्त्र मा पनि स्नातकको डिग्री उपाधि हासिल गरे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चढ्ने कार हाइटे कारको नाम 'क्याडलिक बिस्ट' हो। ट्रम्प ७० वर्ष पुगिसकेकाले उनको लागि चढ्ने कार निक्कै लक्ज़री र हाइटेक प्रकारको रहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। ह्वाइट हाउसका अनुसार यस्तो प्रकारको कार राष्ट्रपति भवनमा केबल १२ वटा मात्रै रहेको छ। प्रत्येक कार बनाउन करिब मिलियन डलर लाग्ने गर्छ।
यो कारमा बम वा गोलीले कुनै पनि क्षति पुर्याउँदैन। ट्रम्पको सुरक्षाको हिबासले निक्कै भरपर्दो मानिएको छ। यो कारको सीसा यति बलियो छ की बम वा गोलीले समेत फुटाउन सक्दैन। कारको टायरमा सिन्थेटिक फाइबर प्रयोग गरिएको छ जुन बीच बाटोमै पड्किने वा फाट्ने कुनै डर हुँदैन। यदि फाटेमा कार रिङ मात्रे पनि सजिलै गुड्न सक्ने गरी बनाइएको छ। यसका साथै कारभित्रै अक्सिजन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'क्याडलिक बिस्ट'को तौल करिब ८ टन रहेको छ भने यसको ढोकालाई पनि मजबुत तरिकाले बनाइएको छ जसलाई कुनै प्रकारको केमिकल वा बायोलोजिकल रियाक्सनले असर गर्न सक्दैन। ९६ किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा कुद्ने यो कारमा नाइट भिजन क्यामरा, साउण्ड प्रुफ, जीपीएस ट्याकिङ, गन, टीयर ग्यास सेल्स र स्याटालाइट कम्युनिकेशन सिस्टम समेत जडान गरिएको छ। यति मात्रै नभएर यसमा आकस्मिक सेवाका लागि भनेर ट्रम्पको ब्लड ग्रूपको दुई वटा युनिट समेत राखिएको छ। जसले ट्रम्पलाई सडकमै पनि रगत दिन सकिन्छ। यसअघि पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि यही कारको प्रयोग गरेका थिए।
कानुनी विषयमा[सम्पादन गर्ने]
ट्रम्प अमेरिकाका ४५ औँ राष्ट्रपति हुन्।
डोनाल्ड ट्रम्पसंग सम्बन्धित लेखहरू
↑ Gillin, Joshua (अगस्ट २४, २०१५), "Bush says Trump wasaDemocrat longer thanaRepublican `in the last decade’", PolitiFact, अन्तिम पहुँच २०१५-१०-२१।
↑ "अमेरिकाको ४५ राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्प को हुन् ?", अन्तिम पहुँच सेप्टेम्बर १७, २०१९।
↑ Michaud, Sarah (अक्टोबर ३, २०११), "Donald Trump, Jr. Welcomes Son Tristan Milos", People, अन्तिम पहुँच अक्टोबर ५, २०११।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=डोनाल्ड_ट्रम्प&oldid=1026684" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०७:३०, ५ जुलाई २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।